Guriga Weelka Video
Maxay yihiin astaamaha ugu waaweyn ee guriga nooca pre-prearricated-ka loo yaqaan?
Xaqiiqdii, nooca loo yaqaan 'K-prefabricated house' waxaa sidoo kale loogu yeeraa guriga saqafka sare ee prefabricated house. Waxaa loo qaybiyaa saddex nooc: guri prefabricated caadi ah, guri prefabricated house iyo prefabricated house ka socda suuqa hadda. Maalmahan, marka loo eego baahida macaamiisha, qaybaha caadiga ah ayaa ...
Maxay yihiin faa'iidooyinka ugu waaweyn ee guriga weelka baakadka baakadka ah?
In kastoo, guriga weelka baakadka fidsan uu yahay mid adag oo waara, oo leh ciriiri hawo wanaagsan, iskuxirnaan iyo isku imaatin ku habboon, waxqabad heer sare ah, iyo iska caabin wanaagsan oo naxdin leh, oo si qoto dheer ay u jecel yihiin inta badan dadka isticmaala. Intaa waxaa dheer, guriga weelka baakadka ee flat waa qaab dhismeed muhiim ah oo leh fr ...
Sidee ayay soosaarayaasha guryaha prefabricated u xoojiyaan guriga horay loo sii qorsheeyay?
Guriga horay loo sii qorsheeyay ee nooca-K ee ay dhistay guriga nooca loo yaqaan 'K-prefabricated house' badanaa wuxuu u sabab yahay dusha sare, sidaas darteed iska caabbinta dabayshu way sii xoog badan tahay, waxayna iska caabin kartaa dabaysha ka sareysa heerka 8. Guriga horay loo sii qorsheeyay ee nooca-K ah sidoo kale waa guri horay loo sii qorsheeyay oo dhaqaale ah qaab dhismeedka bir fudud sida qalfoofka ...
Maxay yihiin faa'iidooyinka guryaha konteenarrada ka duwan dhismayaasha soo jireenka ah?
Waa maxay faa'iidooyinka? Dhismaha guryaha weelka horay loo dhigay waxaa loola jeedaa dhisme ku urursan goobta oo leh qaybo prefabricated ah. Faa'iidooyinka dhismaha noocan ahi waa xawaaraha dhismaha oo dhakhso leh, oo aan xaddidnayn xaaladaha cimilada, badbaadinta shaqaalaha iyo hagaajinta tayada dhismaha. W ...
Sidee loo xaliyaa xaaladahan kunteenarada guryaha degan?
Hadda, konteynarrada guryaha la dhigto ayaa si ballaadhan loogu isticmaalay nolol maalmeedka ku meel gaarka ah ee dadka. Maxaad u dooranaysaa weel aad ku noolaato? Tani sidoo kale waa sababta oo ah way fududahay in la guuro. Meelaha sida injineernimada iyo dhismaha, illaa dhammaadka muddada dhismaha, guryaha shaqaalaha ayaa sidoo kale dib loo heli karaa ...
Maxaa weelal loogu isticmaali karaa guryaha?
1. Qaab dhismeedka qaab dhismeedka qaab dhismeedka qaab dhismeedka qaab dhismeedka qaab dhismeedka qaab dhismeedka ayaa fududahay in la isu geeyo Qof walba wuu ogyahay in guriga weelku yahay nooc qaab dhismeedka jir ah. Jaangoynta iyo tooska ayaa aad ugu habboon shuruudaha wajiga dhismaha. Ka dib markii sawirada la naqshadeeyay, noocyada guriga waa la dhammaystiri karaa illaa iyo inta c ...
Maxaa loo isticmaali karaa guryaha weelka cagaaran iyo kuwa aaminka ah?
Sannadihii ugu dambeeyay, waxay noqotay mid aad iyo aad u caan ah in guryaha konteenarrada loo beddelo guryaha, hudheelada, baararka buugaagta, guryaha la deggan yahay, iyo xafiisyada. Guryaha kontaynarrada ayaa aad iyo aad caan uga noqday sababtuna tahay muuqaalkooda cusub iyo moodada, qiimaha la awoodi karo, iyo ilaalinta deegaanka iyo ...
Waa maxay rajada guri ku noolaanshaha weelku?
Kunteenarada nool waxaa inta badan lagu kireeyaa goobaha dhismaha ee shaqaalaha ay ku noolaadaan, qaarna si gaar ah ayaa loo iibsadaa loona kireystaa in loogu isticmaalo xafiis ahaan. Faa'iidada ugu weyn ee weelasha nool waa dabacsanaan iyo sahlanaan. Saaxiibbada ka shaqeeya goobaha dhismaha ee cidlada ah, ma aha o ...
Gosh! Koonteenarrada ayaa keeni kara farxaddaas oo kale
Fasal weel oo loogu talagalay dadka deggan aagagga musiibada ay ka buuxdo rajada carruurta Maalmo badan ka dib dhulgariirkii Ya'an ee Sichuan, carruurta aagga musiibadu ka dhacday ugu dambayntii waxay aadi karaan iskuulka si caadi ah. Fasallada waxaa lagu dhisay weel hoy ah. Maalin walba waa dheer tahay dadka ...
Maxay yihiin qiimayaasha isticmaalka guryaha guurguura konteenarrada?
Guangdong, soosaarayaasha guryaha mobilada sameeya ayaa soo saaray sida ugu dhaqsaha badan. Waxaa jira hudheel loo qaabeeyey laguna dhisay guryo guurguura konteynarrada. Qaabku wuxuu aad ula mid yahay weelka, gudahana wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah. Dabaqa hoose ee hudheelka waxaa lagu daboolay dabaq alwaax isku dhafan. Tan ...
Huteelka Weelka dhinaceeda / Holzer Kobler Architekturen + Kinzo
Kunteenarradan oo ah 25-mitir-laba-jibbaaran oo mar loo adeegsan jiray in badeecadaha laga raro badda oo dhan ayaa hadda lagu soo ururiyey hudheello. Dadka jecel inay safraan waxay ku riyoon karaan badda halkan. Hoteelka ayaa ku yaal Warnemünde. Adeegsiga kontaynarrada xamuulka ee dib loo rogay iyo meesha ay ku taalo ee gaarka ah, h ...
Haddii aad rabto guri gaar ah, beddelka weelka ayaa ah xulasho wanaagsan
Weelka waa qalab ka kooban oo lagu rari karo alaabooyin baakadaysan ama aan xirnayn oo loogu talagalay gaadiidka, taas oo ku habboon rarida, dejinta iyo daabulka qalabka farsamada. Tani waa mid ka mid ah mucjisooyinka ugu waa weyn ee abid binu aadamku abuuray. Si kastaba ha noqotee, marka lagu daro gaadiidka, ...